IGit 2.31 isiyatholakala futhi iza nokugcinwa kwe-git | Kusuka kuLinux
IGit 2.31 isiyatholakala futhi ifika ngokulungiswa kwe-git
Zimbalwa izinsuku ezedlule kukhishwe inguqulo entsha yeGit 2.3, enye yezinhlelo zokulawula inguqulo edume kakhulu, ethembekile futhi ephezulu yokusebenza, enikezela ngamathuluzi wokuthuthuka angahambisani nomugqa asuselwa ekuhlanganisweni nasekuhlanganisweni.
Uma kuqhathaniswa nenguqulo yangaphambilini, kwamukelwa izinguquko ezingama-679 enguqulweni entsha, elungisiwe ngokubamba iqhaza kwabathuthukisi abangama-85, okungu-23 ababambe iqhaza entuthukweni okokuqala.
I-Git 2.31 Izici Ezintsha Ezintsha
Kule nguqulo entsha yeGit 2.31 ukugqanyiswa komyalo we- "git maintenance" kuqokonyiswa que ivumela ukusebenza ngezikhathi ezithile ezinhlelweni ezingasekeli i-cron. Isibonelo, ngomyalo omusha, ungahlela ukuqala ngezikhathi ezithile inqubo yokupakisha yokubhala ukuze ungalindi ukuthi ukhiye wokugcina uqedele lapho ukupakisha kwenziwa ngokuzenzakalela lapho kwenziwa imiyalo eminingi.
Olunye ushintsho olugqamile yilolo ungeze ukusekelwa ukugcina inkomba ebuyela emuva kudiski (revindex) ngamafayela ephakheji, ngoba iGit igcina yonke imininingwane esesimweni sezinto, ezigcinwa kumafayili ahlukene. Ukwenza ngcono ukusebenza kahle kwendawo yokugcina izinto, izinto zifakwa ngokungeziwe kumafayela ephakheji, lapho imininingwane yethulwa khona ngesimo sokusakazwa kwezinto ezilandelwa ngokulandelana.
Ngefayela ngalinye lephakheji, ifayela lenkomba (.idx) liyakhiwa, livumela isikhombi sento ukuthi sisetshenziswe ukunquma masinyane i-offset kufayela lephakheji lapho le nto igcinwa khona. Inkomba ephambene (.rev) ehlongozwe ku- IGit 2.31 ihlose ukwenza lula inqubo yokunquma isikhombi sento kusuka kulwazi olumayelana nendawo yento kufayela lephakeji.
Phambilini, ukuguqulwa okunjalo kwenziwa endizeni ngesikhathi sokuhlaziywa kusuka kufayela lephakeji futhi ibigcinwe kwimemori kuphela, okungavumeli ukusetshenziswa kabusha kwezinkomba okushiwo futhi kwaphoqeleka ukuthi kukhiqizwe inkomba isikhathi ngasinye. Ukusebenza kokwakhiwa kwenkomba ngu ukunciphisa ukwakha uhlu lwamabhangqa wokuma kwento bese uyihlela ngesikhundla, okungadla isikhathi ngamafayela amakhulu wephakeji.
Ngakolunye uhlangothi, singakuthola lokho ukusebenza kahle kungeziwe ngokususelwa ekubukekeni ngefomethi yefayela yeshadi lokuqinisekisa, esetshenziselwa ukwandisa ukufinyelela olwazini mayelana nokuqinisekiswa, idatha entsha kunombolo yesizukulwane sokuqinisekisa, engasetshenziswa ukusheshisa imisebenzi eyengeziwe ngeziqinisekiso.
Futhi, kungezwe amandla okubhala ngaphezulu igama legatsha elizenzakalelayo kumakhosombe amasha (ukumiswa kwe-init.defaultBranch). Lapho ufinyelela amakhosombe angaphandle, i-git izama ukubheka igatsha i-HEAD elikhomba kulo, okungukuthi, uma ngabe iseva yangaphandle isebenzisa igatsha "eliyinhloko" ngokuzenzakalela, khona-ke ukusebenza kwe- "git clone" kuzozama ukuthola "okuyinhloko" endaweni.
Kwezinye izinguquko okugqamile:
Inketho ye- "–disk-use" kungezwe kumyalo we- "git rev-list" ukukhombisa isifinyezo sosayizi wezinto.
Ukusekelwa kwelabhulali yezincazelo ejwayelekile eyehlisiwe i-PCRE1 isusiwe.
Inikezwe amandla okuvimba ngamandla ukusetshenziswa kwezinqamuleli, zisebenza ngaphandle kwe-hashing algorithm. Ukuvinjelwa kunikwe amandla ngokunikeza inani "cha" kupharamitha eyi-core.abbrev.
Inketho "-path-format" ingezwe kumyalo we- "git rev-parse" ukuze uchaze ngokusobala ukukhishwa kwezindlela ezihlobene noma eziphelele.
Izikripthi zeBash eziqedela ngokuzenzakalela zenza kube lula ukufaka imithetho yokuqedela ama-subcommands wangokwezifiso "git"
Kungezwe inketho ye- "–stdin" kumyalo we- "git bundle" ukuze ufunde izixhumanisi ezisakazwa ngokujwayelekile.
Izinketho ze- "–left-only" kanye "–right-only" zingezwe kumyalo we- "git range-diff" ukukhombisa uhlangothi olulodwa lobubanzi obuqhathanisiwe.
Inketho engeziwe "- skip-to = "Kumyalo we-" git difftool "wokuqalisa kabusha iseshini ephazanyisiwe isendleleni engqubuzanayo.
Ikhodi Yokuziphatha (Indlela Yokuziphatha), echaza imigomo eyisisekelo yokuxazulula izingxabano phakathi kwabathuthukisi, ibuyekezelwe enguqulweni engu-2.0 (ngaphambili kwakusetshenziswa inguqulo 1.4).
Okokugcina uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungabonisana isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IGit 2.31 isiyatholakala futhi ifika ngokulungiswa kwe-git
I-AWSOS-P4: Ukuhlola Umthombo Ovulekile omkhulu futhi okhulayo we-AWS - Ingxenye 4
I-Chrome OS 89 iza nefoni Hub, izithuthukisi ze-Wi-Fi Sync nokuningi